श्रीमती परपुरुषसँग लागेपछि यस्तो लेखेर बिदेशमै अस्ताए नरेश (भिडियोसहित) – Khula kura
श्रीमती परपुरुषसँग लागेपछि यस्तो लेखेर बिदेशमै अस्ताए नरेश (भिडियोसहित)
रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए नरेश राना । उहीँ नरेशसंग एक जना ब्यक्तिसंग केहि कुरकाे बिषयमा विवाद परेकाे थियो । उनले मलेसियामा देह त्याग गरेका हुन् । उनले प्रकाश बस्नेतले आफुलाई यस्तो निर्णय गर्न बा ध्य पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेका थिए ।
घटना अनुसार, २८ वर्षका नरेश रानालाई अर्का ब्यक्तिले नै देह त्याग गर्न बाध्य पारेको बताइएको छ । विदेशमा चिनिएका साथी प्रकाशसंग नरेशको श्रीमतीको पनि कुराकानी हुन थाल्छ ।
नरेशले देह त्याग गर्नु भन्दा अघि सम्म पनि प्रकाशसंग सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी भइरहेको देखिन्छ । नरेश ३ वर्ष देखि मलेसियामा थिए । नरेशको श्रीमतीसंग कुराकानी हुन्थेन ।
नरेशको श्रीमतीको प्रकाशसंग कुराकानी हुन थालेको दुई वर्ष भएको बताएकी छन् । प्रकाश बस्नेतको श्रीमतीसंग नरेश नजिक भएको नरेशको श्रीमतीले बताएकी छन् । नरेशले आफुले विदेशमा कमाएको पैसा पनि प्रकाशकै श्रीमतीलाई पठाउने गरेको आफुले थाहा पाएको पनि बताएकी छन् ।
त्यसैको रि स फेर्न प्रकाश पनि नरेशको श्रीमतीसंग नजिकिएको उनको भनाई छ । प्रकाशले आफुसंग विवाह गर्न द वाव दिएको पनि नरेशको श्रीमतीले बताएकी छन् । म संग विवाह गरिनस् भने तेरो श्रीमानलाई जे पनि गर्न सक्छु भनेर द वाव दिएको नरेशको श्रीमतीको भनाई छ ।
नरेश प्रकाशको श्रीमतीसंग लाग्नुभन्दा पहिला पनि अन्य युवतीहरुसंग पनि नजिकिएको उनको भनाई छ । नरेशले देह त्याग गर्नु अघि सामाजिक संजाल फेसबुकमा एउटा लामो स्टेट्स प्रकाश भन्ने एक युवकलाइ लेख्दै आफु यो संसारबाट बिदा लिएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेको स्टेट्स जस्ताको तस्तै :
मेरो प्रिय दुस्मन प्रकाश बस्नेत जी म तलै कुन शब्दले सम्झाउ ? तेरो मेरो लिनु केहि छैन र पछि गर्न छोडदे भनेर । तैले गर्न खोजेको के हो ? तैले म बाट चाहेको के हो ? के प्रमाण छ त संग मलाई केटि बेच्ने दलाल हो भन्दै नानाथरी धावा बोल्दै फेसबुकमा भुक्ने कति सम्मको निच होस् त ?के म दलाल हो ?
अहिले सम्म मैले कतिलाई बेचेको छु केहि प्रमाण छ ? यदि हिम्मत छ भने आमाको दश धारा धुध खाएको छस भने छातीमा चार ओटा रौ छ भने मेरो अगाडी आइज र मलाई मा’रेर देखा दम छ ? यदि हिम्मत वाला बाउको छोरा होस् भने तैले भुकेको जति प्रमाण बोकेर कानुनि प्रक्रियामा गैर त्यो केटि बेच्ने दलाल हो भनेर अदालतमा प्रमाण पेस गर सक्छस हिम्मत छ ?
तैले मलाई का’ट्छु मा’र्छु भन्ने मेरो प्रसनल जिन्दगीमा आएर मेरो भित्रि यथार्थ लाइ उल्टो बनाएर नानाथरी आरोप लगाएर बोल्ने अधिकार कसले दियो तलाई ? आखिर को होस् त तैले दुई चार शब्द धावा बोलेर दुई चार जनाको भिड खडा गर्छस होला ! तर याद राख म त्यो शहरको शेर हुँ ।
जसको एक आग्रहमा शहर खालि हुने छ बुझिस । यत्ति कुरा याद गर तैले आज सम्म म प्रति गरेको हर्कत म प्रति बोलेको झुटो शब्दको एक एक हिसाब निकाल्ने छु । जति मलाई आरोप लगाएको छस त्यो भन्दा डबल प्रमाण म संग छन् जुनसुकै ठाउँमा गएपनि देखाउन सक्छु । मेरो अगाडी त केहि पनि होइनस, त जस्ता दुई चार जना तह लगाउने हिम्मत र दम म संग पनि छ यो कुरा राम्रो संग याद गरेर मात्रै भुक्ने गरेस ।
तैले मेरो जिन्दगिसंग खेल्ने प्रयास कदापी नगरेस तेरो लागि म हराम बनेर निस्की सकेको छु जुन सुकै ठाउँमा पनि तलै सक्न सक्छु । यदि हिम्मत छ भने तलै म बस्ने ठाउँ को म बस्ने होस्टेलको म सुत्ने रुमको एड्रस दिन्छु तर मेरो फोटो राखेर नानाथरी आरोप लगाउंदै मेरो फोटोमा रिप लेखेर मेरो आफन्त दाजुभाइको मन दुखाने काम बन्द गर ।
नरेसले महानगरीय अ प राध महाशाखालाइ पनि प्रकाश भन्ने युवकले आफुलाई दुख दिएको भन्दै फेसबुक म्यासेन्जरमा लेखेको स्क्रिन सट पनि फेला परेको छ जुन तल राखिएको छ ।
प्रकाश बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा नरेशलाइ लेखेको फेसबुक स्टेट्स पनि अहले सामाजिक संजालमा जताततै भेट्न सकिन्छ ।
नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह गर्ने तयारीमा, को हुन् उनका हुनेवेला वेहुला?
असारबाट निषेधाज्ञा हट्ला त ? बाहिरियाे यस्ताे खबर !